डेटिङ, प्रेम, सम्बन्ध
वयस्कों को लागि विषय
शहरहरू र देशहरू
शर्मा - घरमा नाक खाना पकाउने रोचक व्यञ्जनहरू
22.12.2018 टिप्पणी छोड्नुहोस्
शर्मा - घर मा नाश्ता तयार गर्न को लागि दिलचस्प व्यञ्जनहरु। पूर्व युरोपेली व्यंजनहरु लाई धेरै व्यंजनहरु संग प्रस्तुत गर्दछ, जो आज पनि धेरै लोकप्रिय छ। यी उपहारहरूमध्ये एउटा शर्मा थियो - एक नुस्खा जुन सबैभन्दा पुरानो डिश - किब्याब पकाउने टेक्नोलोजीबाट उत्पन्न भयो। पातलो पिटा संग ...
बढ्दो सूर्यको भूमिमा नयाँ वर्षको परम्पराहरू
जापानमा नयाँ वर्षको परम्पराहरू। जापानमा नयाँ वर्षको परम्पराहरू जापानमा परंपराहरूको बहुतायतको लागि चिनिन्छ, र नयाँ वर्ष छुट्टिहरू बिना ती थिएनन्। के तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ जापानमा नयाँ वर्षको परम्पराहरू पहिले र अहिले नै अवस्थित थिए? त्यसपछि पढ्न। उल्लेखित परम्पराहरु ...
नयाँ वर्षको तालिकामा चिसो एपटेकरहरू धेरै लोकप्रिय छन्
नयाँ वर्षको टेबलमा ठुलो एपेटाइजरहरू धेरै लोकप्रिय छन्। स्वादिष्ट, सुन्दर र सास नास्ताहरू विभिन्न प्रकारको छुट्टै मेनुमा समावेश हुन निश्चित छन्, र पहेंलो मिर्नेन पिगको नयाँ 2019 को बैठकमा कुनै अपवाद छैन। र हेरचाह गृहिणीहरू, आफ्ना घरहरूमा अतिथिहरू प्राप्त गर्न तयारी गर्दै ... अग्रिम ...
बढ्दो सूर्यको भूमिमा नयाँ वर्ष: परम्पराहरू
जापानमा नयाँ वर्ष: जापानमा नयाँ वर्ष परम्पराहरू (जापानी। ओ-शोगुत्सु) सबैभन्दा प्रिय र रंगीन छुट्टी हो, जुन 1 जनवरीमा जर्जगोरी क्यालेन्डर अनुसार एक हजार आठ सय पचास वर्ष पछि मेजी बहाली पछि स्वीकृत गरिन्छ। त्यस अघि
पनीर नाश्ता "हिमपात"
पनीर नाक "स्नोम्यान" एक उत्सव तालिकामा एक स्वादिष्ट नास्ता। सामग्री: हामी नयाँ वर्षको लागि तयार रहन्छौं! आज म धेरै स्वादिष्ट पनीर नाश्ता को लागि एक नुस्खा छ, र सिर्फ पनीर नहीं, तर दुई प्रकार को पनीर देखि, जो एक दूसरे को पूरक पूरक। मसाले ...
नयाँ वर्षको ईव 2019 व्यञ्जनहरु को लागि व्यञ्जनहरु संग सरल र स्वादिष्ट तस्वीरहरु
नयाँ वर्षको नयाँ वर्षको ईव 2019 व्यञ्जनहरूको लागि भित्ता तस्वीरहरू सरल र स्वादिष्ट हुन्छन्। समय छिटो छिटो हुन्छ। शरद ऋतु बस्यो। उनले हामीलाई वर्षा र खराब मौसम खारेज गरे, बहु रङको पाना सुत्नुभयो। तर एक ठुलो बिहानको तातो हावामा प्रकट हुन सुरु हुन्छ, पहिलो ...
बढ्दो सूर्यको भूमिमा नयाँ वर्ष: चलन र परम्पराहरू
21.12.2018 टिप्पणी छोड्नुहोस्
जापानमा नयाँ वर्ष: परम्परा र परम्पराहरू। जापानमा नयाँ वर्ष मनाईन्छ जापानमा नयाँ वर्ष मनपर्ने छुट्टियों मध्ये एक हो। सबै पछि, छुट्टियाँ, जुन डिसेम्बर सेप्टेम्बर देखि चार जनवरी सम्म, देश मा लगभग सबै व्यापारिक जीवन रोक्न। ...
बढ्दो सूर्य, चलन र परम्पराहरूको भूमिमा नयाँ वर्ष
जापानमा नयाँ वर्ष नयाँ वर्ष सबै देश र जनताको लागि सबैभन्दा ठूलो छुट्टी हो। यो एक अवकाश हो जुन तपाईंलाई गत वर्षको भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ, सम्झनुहोस् कि गत वर्षको के भयो, शुभ घटनाहरूको आनन्द लिनुहोस् र यसको विपरीत दु: ख सम्झनुहोस् र उनीहरूको आचरण गर्नुहोस्।
नयाँ वर्षको एपटिजाइजर व्यञ्जनहरू
व्युत्पन्न एपेटाइजर नयाँ वर्ष मैले जुलियन पकाउने विकल्पहरूको एक प्रस्ताव गर्दछु। प्रसारणको बारेमा खुशी छ! हेलेन चेकोलोवाको व्यञ्जनहरू तर हरेक घरघरबाट टाढाको भान्सामा कोकून छ, तर तपाईं केवल एक कैफे वा रेस्त्राँमा जेलीन खाई सक्नुहुन्न। कुकुर स्वादिष्ट ...
नयाँ वर्षको जापानी परंपराहरू र व्यवहार गर्दछ
नयाँ वर्षको जापानी परम्पराहरू र व्यवहार गर्दछ हामी हामी जापानमा नयाँ वर्षको उत्सवको परम्पराहरूको बारेमा बताउनेछौं, जुन विशेष प्रतीकात्मक अर्थको साथ दासहरूका लागि असामान्य अनुष्ठान समावेश गर्दछ। र हामी पनि आश्चर्यजनक जापानी जापानी खानाको नुस्खा साझा गर्नेछौं, जुन विशेष गरी तपाईंको लागि तैयार गरिएको थियो ...